के तपाई बेलुका ढिलो खाना खानुहुन्छ ? यस्ता समस्या देखिन सक्छ होसियारGandaki Press
स्वस्थ रहन स्वस्थ खानपानमात्र भएर पनि हुँदैन त्यस खानालाई खाने सहि समय पनि हुन जरुरी हुन्छ । बेलुका ७ बजेपछि खाना स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ । हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ ।
१.मोटोपनको शिकार:जव हामी राती ढिला खाना खान्छौं । तब हाम्रो खाना राम्रोसँग पच्न पाउँदैन् । राती शारीरिक काम पनि नहुने भएकोले हामीले खाएको खाना बोसोमा परिणत हुन्छ र मोटोपनको शिकार हुने खतरा बढ्छ । जसको कारण कोलेस्ट्रोल बढ्छ र मुटुको रोग पनि लाग्न सक्छ । मोटोपन अहिलेको जीवनशैलीमा धेरैको लागि समस्याको विषय बनेको छ ।
२. छाती पोल्ने: धेरैजसोको बानी हुन्छ खाना खाने बित्तिकै सुत्ने । बेलुका ढिलो खाना खाँदा पाचन प्रणालीले पचाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले गर्दा छाती पोल्छ पछि गएर ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्तिन सक्छ । एक त बेलुका ढिलोगरी खाना खाने । अर्कोतिर खानेविक्तिकै सुत्ने जसले गर्दा छाती पोल्ने समस्या हुन्छ । बेलुका एकदमै कम खाना खाने । खाना खाएपछि कम्तिमा २ घण्टापछि मात्रै सुत्ने गर्नुपर्छ ।
३.उच्च रक्तचापको जोखिम बढ्ने: बेलुका खाना ढिलो खाँदा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढि हुन्छ । बेलुका हाम्रो शरिरलाई उर्जाको आवश्यक हुँदैन् । बेलुकाको खाना खाएपछि हाम्रो काम हुँदैन् र खाना पच्दैन् । उच्च रक्तचाप खतरनाक रोग हो । नेपालमा दिन प्रतिदिन यो रोग बढ्दै गैरहेको छ । यस रोगले कुनै पनि लक्षण नदेखाइकन नै बिरामीका प्रमुख अङ्गहरु मुटु, मिर्गौला, आँखा, दिमाग आदीलाई क्रमिक रुपले खत्तम पार्दै लगेर विरामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ । त्यसैले बेलुका खाना खाँदा एकदमै ध्यानदिनुपर्छ ।
४.अपच: अपच हुने समस्या भएकोले ढिलो खाना खान हुँदैन् । पाचनको लागि बढि समय लाग्छ । हामीले जति खान्छौ, उति नै पच्नुपर्छ । ढिलो खाना खाँदा समस्या झन बढ्न सक्छ ।
५.मधुमेह: बेलुका ढिलो खाना खाँदा खानाबाट प्राप्त हुने सबै शक्ति खर्च हुँदैन् । यस्तोमा शरिरमा भण्डार भएर बस्छ र रगतका चिनीको मात्रा बढि भएर मधुमेह हुने खतरा बढ्छ ।
६. अनिद्राको समस्या:बेलुका ढिलो खाना खाँदा खाना राम्रोसँग पचिसकेको हुँदैन् । हामीले खाएको खाना खाननलीमै बस्छ । जसलेगर्दा बेचैन र छटपटी हुन्छ । र निद्रा पर्न गाह्रो हुन्छ ।
७. तनाव हुने: अनिद्राको समस्याले गर्दा तनाव बढ्छ । राम्रोसँग निद्रा नलागेपछि शरिर भारी हुने, फ्रेस अनुभव नहुने भएकोले तनाव बढ्छ । दैनिकीमा नै असर पर्छ । त्यसकारण बेलुका ढिलो खाना खानु राम्रो होइन ।
८. काम गर्न शक्ति मिल्दैन:बेलुका ढिलो खाना खाँदा बिहानको नास्ता गर्न मन लाग्दैन । जसकारण दिनभर काम गर्न उर्जाको कमि हुन्छ । चाँडो थकाइ लाग्ने काम गर्न मन नलाग्ने हुन्छ ।
९. पोषक तत्वको कमि: बेलुका ढिलो खान खाँदा बिहान भोक लाग्दैन । भोक नलागेपछि बिहानको नास्ता कम खाईन्छ । जसले गर्दा शरिरमा चाहिने पोषक तत्वको कमि भएर विभिन्न किसिमको रोग लाग्न सक्छ ।
१०. चिडचिडाहट: यदि बेलुका ढिलो खाना खाएमा भोली पनि त्यही समयमा भोक लाग्छ । एकै समयमा खाना नखाँदा ढिलो खाना खाने बानी बस्छ । जसले गर्दा खाना अपच हुने, ग्याँस जम्ने, निद्रा नलाग्ने हुन्छ र चिडचिडाहाट हुन्छ ।
यदि तपाई बेलुका ढिलो खाना खानुहुन्छ भने यो बानी आजैबाट त्याग्नुहोस् । चाँडो खाना खाँदा विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ भने आजैबाट किन सुरु नगर्ने र?